Inona no ilainao ho fantatra momba ny fialam-boly mitokana
Posted by Tranquillus | Feb 29, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny teny hoe fialan-tsasatra dia matetika ampiasaina amin'ny fialan-tsasatra mandritra ny dimy herinandro. Saingy tsy izany foana ny zava-drehetra, ny teny mitovy dia mirakitra dikany maro hafa. Amin'ity lahatsoratra vaovao momba ity lohahevitra ity dia hifantoka amin'ny iraika ambin'ny folo ambin'ny folo isika karazana mamela.
Amin'ireto andalana vitsivitsy ireto dia hiezaka izahay hampahafantatra anao ny fialan-tsasatra amin'ny razana, avelao ho an'ny ankizy marary sy fialam-bidy sabbatical. Manantena izahay fa ny fahazoanay ny lalana no ahafahanao mahita ireo ravina rehetra ireo sy ny fomba fanaony ary hahasoa anao izany rehetra izany.
NY LEAVEFOMPOANA ARY FAHADIOVANA NY ZANAKA
Any Frantsa, ny fialan-jaza sy ny fitaizan'ny zaza dia voatanisa ao amin'ny lahatsoratra L1225-35, L1226-36 ary D1225-8 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny asa. Natao ho an'ny mpiasa rehetra izany, izay lasa ray, na inona na inona asa arak'asa, ny fahanterana, karazana fifanarahana asa ary sata ara-tsosialy. Ny mpiasa miasa tena dia afaka manararaotra an'io karazana fialan-tsasatra io ihany. Ny halavan'ny hakotron'ny ray sy ny zaza dia miovaova arakaraka ny isan'ny fahaterahana. Maharitra 11 andro anisan'izany ny faran'ny herinandro raha misy fahaterahana iray, 18 andro raha miteraka fahaterahana marobe. Ankoatr'izay dia azo alaina aorian'ny fialan-tsasatra 3 andro nahaterahana.
Ny 11/18 andro momba ny fitaizana sy ny fitaizan-jaza dia tsy azo zaraina.
Ny fialan-tsasatra fananganana dia fialan-tsasatra izay ananan'ny mpampiasa rehetra manana adidy hanome ny mpiasa mandray zanaka iray na maromaro. Rehefa tsy takatry ny fifanarahana asa ny fikolokoloana ny karama, ny mpiasa izay naka io fialan-tsasatra io dia azo onitra raha mahafeno ireto fepetra manaraka ireto izy:
efa voasoratra anarana tamin'ny rafitra fiarovana ara-tsosialy mandritra ny 10 volana farafaharatsiny
niasa nandritra ny 200 ora nandritra ny 3 volana mialoha ny fananganan-jaza.
Ny faharetan'ny fialan-tsasatra fananganana zaza dia mety haharitra:
10 herinandro ho an'ny ankizy iray na faharoa
18 herinandro rehefa mandray zaza fahatelo na mihoatra
22 herinandro rehefa fananganana marobe io ary efa manana zanaka roa miankina ianao.
Amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny herinandro talohan'ny fananganan'anaka ny zaza (ren) ary mety hiarahana amin'ny 3 andro amin'ny fialan-tsasatry ny fahaterahana.
Ny fialan-tsasatra dia azo zaraina eo amin'ny ray aman-dreny roa, izay hanampy 11 na 18 andro hafa raha ampidirina ao an-trano ny zaza maro.
Ny fialan-tsasatry ny zaza marary dia fialan-tsasatra ahafahan'ny mpiasa tsy eo am-piasana mandritra ny fotoana fohy mba hahafahany hikarakara ny zanany marary. Araka ny voalazan'ny andininy L1225-61 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa, misy fepetra mifehy io fialan-tsasatra io, anisan'izany ny hoe:
ny zanaky ny mpiasa dia tokony ho latsaky ny 16 taona.
ny mpiasa dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ilay zaza.
Amin'ny lafiny iray, ny fahazoan-jaza dia tsy omena araka ny laharan'ny zon'ny mpiasa na araka ny toerany ao anaty orinasa. Raha tsorina dia adidin'ny mpampiasa ny hanome izany ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa.
Ity fialan-tsasatra ity, ankoatry ny tsy karamaina, dia manana faharetana miovaova arakaraka ny taonan'ny mpiasa sy ny isan'ny ankizy. Maharitra noho izany:
3 andro ho an'ny ankizy iray latsaky ny 16 taona
5 andro ho an'ny ankizy latsaky ny 1 taona
5 andro ho an'ny mpiasa izay mikarakara ankizy 3 latsaky ny 16 taona.
Amin'ny tranga sasany dia manome fialan-tsasatra lava kokoa ho an'ny ankizy marary ny fifanarahana iombonana.
Ny fialan-tsasatra sabaktika dia io fialan-tsasatra io izay manome zon'ny mpiasa rehetra tsy hiasa mandritra ny fotoana voafetra, ho an'ny tombontsoany manokana. Ny mpiasa dia manana:
farafahakeliny 36 volana ao anatin'ny orinasa,
manana 6 taona eo ho eo amin'ny asa matihanina,
izay tsy nandray soa tamin'ny fialan-tsasatra fanazaran-tena, dia miala amin'ny fananganana orinasa na fialan-tsasatra sabotsy nandritra ny 6 taona lasa teo tao amin'ny orinasa.
Ny faharetan'ny fialam-bidy sabbatic amin'ny ankapobeny dia miovaova eo amin'ny 6 ka hatramin'ny 11 volana. Ankoatr'izany, mandritra ity vanim-potoana ity, tsy mahazo tambin-karama ny mpiasa.
Ny fehezan-dalàna momba ny asa, amin'ny alàlan'ny lahatsorany L3142-1, dia manome raha misy ny fahafatesan'ny mpikambana iray ao amin'ny fianakavian'ilay mpiasa noho ny fialan-tsasatra manokana fantatra amin'ny hoe fialan-tsasatra. Izy io dia omena ny mpiasa rehetra tsy misy zokiolona. Ankoatr'izay, ny halavan'ny fialan-tsasatry ny famoizam-po dia miovaova arakaraka ny fatorana ampiasan'ny mpiasa amin'ilay maty. Noho izany dia:
3 andro raha aorian'ny fahafatesan'ny mpivady, vadintany sivily na mpiara-miasa.
3 andro nahafatesan'ny reny, ray, rahalahiny na anabavy na rafozan-dreny (ray na reny)
5 andro ho an'ny tranga mampihomehy amin'ny fahaverezan'ny zaza.
HAMAKY Ahoana no hamoronana ny asanao manokana sy hahaleo tena?
Ny fifanarahana iraisana sasany dia nampitombo ny halavan'ny tsy fisian'ny tsy fisian'ny lalàna. Lalàna vaovao no tokony hiseho tsy ho ela hanitatra ny fialan'ny zaza maty hatramin'ny 15 andro.
FAHAFIANA NY FIVORIANA HO AN 'NY FIKOTANANA
Ny lalàna dia manome fialan-tsasatra manokana antsoina hoe fialan-tsasatry ny ray aman-dreny. Ity fialan-tsasatra ity dia manome ny mpiasa ny mety hijanonana ny asa hikarakarana ny zanany izay hanana toe-pahasalamana izay mitaky fikarakarana famerana sy fihenjanana maharitra.
Ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny dia omena ho an'ny mpiasa tsy miankina, mpiasa sivily maharitra, mpiasa tsy miasa maharitra ary mpiofana.
Raha fintinina dia azo omena rehefa manana kilema ny zaza, marary mafy na niharan'ny lozam-pifamoivoizana manokana. Mampalahelo fa tsy karama ary tsy maharitra 310 andro.
Araka ny lalàna 2019-1446 tamin'ny 24 desambra 2019, misy mpiasa afaka manajanona ny asa tonga manampy ny havan-tiana iray izay mety hanana fahaleovan-tena amin'ny fahaleovantena na mety ho kilemaina. Ity fitsangantsanganana, antsoina hoe fialan-tsasatra ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny asa ataon'ny mpiasa.
Mba hahazoana tombony amin'izany dia tsy maintsy ananan'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa 1 taona eo ho eo ny mpiasa ao. Ankoatr'izay, ny havana hanampy dia tsy maintsy mitoetra maharitra any Frantsa. Izany dia mety ho vady, rahalahy, nenitoa, zanak'olo-mpiray tam-po, sns. Azonao atao koa ny zokiolona manana fifandraisana akaiky amin'ny mpiasa.
Ny halavan'ny fialan-tsasatry ny fikarakarana dia voafetra ho 3 volana. Na izany aza dia azo havaozina.
Ny fifanarahana iombonana dia manome toe-javatra tsara kokoa, aza adino ny manontany.
Ny lalàna dia manome ho an'ny mpiasa izay manana olon-tiana tratry ny aretina tsy azo sitranina, fialantsasatra manokana antsoina hoe fialana amin'ny firaisan-kina. Noho ity fialan-tsasatra ity dia mety mampihena na hiato vetivety ny miasa mandritra ny fotoana fohy kokoa ny mpiasa mba hikarakarana tsara ireo olon-tiana iray naratra mafy. Ity farany dia mety ho mpirahalahy, rahavavy, havoana, taranja iray sns.
HAMAKY Rafitra fahasalamana frantsay: fiarovana, vidiny, fanampiana
Ny faharetan'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana dia farafahakeliny 3 volana ary ny farany 6 volana. Ankoatr'izany, mandritra ny vanim-potoana fialan-tsasatra, ny mpiasa dia afaka mahazo onitra 21 andro (fotoana manontolo) na fanonerana (andro roa) (mpiasa).
Ny lalàna dia manome ho an'ny mpiasa rehetra andro fialan-tsasatra miavaka amin'ny fanambadiana, PACS na ny fanambadian'ny iray amin'ireo zanany. Ho fanampin'izay, araka ny fehezan-dalàna L3142-1 sy ny fanarahana ny Fehezan-dalàna momba ny asa, ny mpampiasa rehetra dia voatery manome fialan-tsasatra am-panambadiana na PACS ho an'ireo mpiasa mangataka izany. Ho fanampin'izay, ny mpiasa dia afaka manararaotra azy na miasa amin'ny CDD, CDI, na fiofanana na asa vonjimaika izy.
Raha tsorina dia, rehefa manambady na mamarana PACS ny mpiasa iray, dia mahazo tombony amin'ny 4 andro. Raha ny fizotran'ny fanambadian'ny zanany dia manan-karenan'ny mpiasa 1 andro tsy iasana ny mpiasa.
FARANY AN-TRANO IHANY
Ny fandaozan'ny ray aman-dreny manontolo andro dia karazana fialan-tsasatra hafa nomena ny mpiasa rehefa teraka ny zaza na teraka. Omena ny mpiasa izay manana 1 taona eo ho eo amin'ny zokiolona ao amin'ny orinasa izy io. Ity zokiolona ity dia hotsaraina amin'ny ankapobeny rehefa jerena ny daty nahaterahan'ny zaza na ny fahatongavany tao an-tranon'ny zaza nitaiza.
Ny fialan-tsasatra amin'ny fotoana feno dia maharitra 1 taona, azo havaozina amin'ny fepetra sasany. Etsy andaniny, raha ny zaza no niharan'ny lozam-pifamoivoizana na fahavoazana mafy dia azo atao ny manitatra ny fialan-tsasatra mandritra ny 1 taona hafa. Na izany aza, ny fialan-tsasatra amin'ny fotoana feno dia tsy voaloa.
MITADIAVANA NY FANDAHARAM-PIVAROTANA AN-TOKONY MBOLA MANDROSO
Ny lalàna dia manome ho an'ny mpiasa izay manao fehezin'ny politika ao an-toerana handray soa amin'ny fahazoan-dàlana sy ny fatiantoka amin'ny ora. Noho izany, ny fialan-tsasatra amin'ny fampiharana ny andraikitra politika eo an-toerana dia manome ny mpiasa ny fanatanterahana ny adidiny araka ny baikony (faritra isam-paritany, monisipaly na departemanta voafidy).
Tsara homarihina, ankoatra ny zavatra hafa, fa ny faharetan'ny tsy fiandrasana ireo dia tsy voafaritra mialoha. Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra rehetra dia mamela ny mpiasa voafidy amin'ny fotoana ilaina mba hampihatra tsara ny andraikitra.
Inona no ilainao ho fantatra momba ny fialam-boly mitokana 25 aprily 2020Tranquillus
Teo alohaOhatra ny mailaka hangataka fialan-tsasatra raha tsy misy karama.
manarakaMahaiza mitantana amim-pahombiazana
Manokatra tsipika laharana finday ary mahita mpandraharaha amin'ny aterineto any Frantsa
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fananana
Mianara mijery ny tsipika payslip anao andalana